SXAE-412 zvizere zvakakwana CNC 4 mavara machena machina machina (servo machine)-sxaequipment-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
Shona language SXAE-412 zvizere zvakakwana CNC 4 mavara machena machina machina (servo machine)
Zita remagetsi: zvizere zvakashongedzwa CNC 4 mavara macrini machina machina (servo machine)
mashizha akawanda, rotary, multicolor, zvigadziri uye zvisikwa, zviyo zvewaini bhodhoro, doro regirazi, mabhodhoro, mabirasi, makirasi, makate, mugorosi.
1. Kushandisa purogiramu yemutambo, multi axis servo robot.
2. Kunyora tafura yepamusoro, kunyatsoruramisa.
3. Kushandura mafashoni, zvose zvinoshandiswa servo: kushandura musoro, mesh frame, kutenderera, chigadziko kumusoro / pasi, zvose zvinotungamirirwa ne servo motors.
4. Majee ose nemunhu mumwechete servo motokari, nokuda kwekushanduka.
5. Kushandura uye nyore nyore kuchinja, kubva pane chimwe chigadzirwa kune imwe. Rongedza zviyero pamusana pekusaona.
6. UV UV kuporesa system, nguva yakareba yehupenyu, simba rekuchengetedza.
7. Kushandura kamwe chete, servo robot.
8. Kuchengetedzwa kwekuchengeteka neEEC.
1. Musoro unogona kushandiswa, hutsva hunopisa, hukuru hwekudhinda uye kupisa kupisa pamwe chete.
2. Kamera yekuona maitiro, kwezvinhu zvinogadziriswa, zvisingabvumirano, kutiza kubva pamutsara.
Kudhinda kasi: 1800-2100 Zvikamu / awa (kugadziriswa kwemaitiro akasiyana uye chinyorwa chechinyorwa)
Kudhinda nzvimbo: Diameter 30-90mm, Height 80-220mm
Mhando yemhando: L 5400 * W 5000 * H 2400mm
Simba: AC 380V, 3-Phase, 50Hz / 60Hz, 23Kw (inoenderana neUV), 5KW (UV LED)
akakwirira uye kushanda, kwenguva refu yakasimba, kuwedzera nguva yako yekufamba,
kuderedza mari yebasa, mari inoshandiswa, CE inonyatsoenderana.
tailor yakaitwa zvizere zvachose CNC 4 mavara kuvharidzirwa kushandiswa servo motori mamishini.
nekukurumidza kuchinja, kuwedzera zvakanyanya kugadzirwa,
tsika yakagadzirwa zvakazara zvachose CNC multicolor screen printing servo system Factory.
shandura chero sarudzo ipi neipi, kubatana kwakanaka uye opacity ink yekudhinda,